४७ बर्ष जेठ्ठो संग बिवाह गरेकी २२ बर्षीया पुजा ए’क्कासी रु’दै मि’डियामा – AB Sansar
४७ बर्ष जेठ्ठो संग बिवाह गरेकी २२ बर्षीया पुजा ए’क्कासी रु’दै मि’डियामा
October 10, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on ४७ बर्ष जेठ्ठो संग बिवाह गरेकी २२ बर्षीया पुजा ए’क्कासी रु’दै मि’डियामा
सुन्दा अ’चम्म लाग्छ तर इलामका चुलाचुली गाविसका सिंह प्रसाद लिम्बुले आफु भन्दा ४७ वर्ष कान्छी श्रीमती विवाह गरेका छन । पुजा लिम्बु भर्खरै २१ वर्ष टेकिन तर सिंह प्रसाद ६७ वर्ष पुगिसकेका छन । पहिला उहाँले नै विवाहको प्रस्ताव गर्नुभयो २१ वर्षकी पुजाले भनिन्, भर्खरका ठिटोहरुले त छोडीहाल्छन् तर बृद्धले त छोड्दैनन नी विवाह पक्का हुन्छ त्यही भएर विवाह गरें ।
पुजाले यसो भन्दा उनका श्रीमान भने हाँसीरहेका थिए । उनले सोल्टिीनी भनेर जिस्क्याउने गर्थे । उनलाई विवाह नै गर्छु भन्ने लागेको थिएन । किनभने उनलाई पुजाले मान्छिन् भन्ने लागेको थिएन । तर पनि विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्दा पुजाले मानिहालिन् ।त्यसपछि उनले आफ्नो घरमा भित्र्याए । उनको एउटा हात अलि कमजोर छ तर घरको काम सबै पुजाले नै गर्छिन ।
कुराकानीको क्रममा पुजालाई बृद्दसंग किन विवाह गर्नु भएको भन्दा उनि भन्छिन, निक्कै अनौठो लाग्ने यी जोडीको प्रेमकथा पनि निक्कै रोचकको छ । सिंह प्रसादले पुजालाई विवाहको प्रस्ताव राखेको र पूजाले पनि स्वीकारेकी थिइन । सिंह प्रसादले यत्तिका उमेर सम्म विवाह नै नगरेका भने हैनन् । वास्तवमा उनले पुजा अगाडी नै चार विहाह गरिसकेका छन । पुजा त पाचौ श्रीमती रहेछिन । उनको पुर्व पत्नीहरु कोहिले छो’डेर हिडेका र कोहिको मृ’त्यु भैसकेको सिंह प्रसाद बताउछन ।
आज सोच्नै नसकिने गरि सुनको मुल्य घट्दा, बजारमा सुन किन्नेको घुइँचो !
महेन्द्र सिंह धोनीकी ६ वर्षीया छोरीलाई ब’ला’त्का’रको ध|म्की
कुनकुन जिल्लामा हुदैछ त अब लकडाउन? यस्तो छ ओलि सरकारको तयारी !
प्रियांकालाई औषधि लिन अस्पताल हिडेका पति आयुष्मानलाई के भयो ? (भिडियो सहित)
March 6, 2021 Ab-संसार